လင်းပြာနွေ: June 2007
Posted by လင်းပြာနွေ at 2:45 AM2comments:
မေတ္တာတရား၊ နှုတ်ဆက်တေးနှင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချနင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာဆရာ
ကိုယ့်နှလုံးသွေးကိုယ် အသုံးတော်မခံဘူး ။
မခမ်းမနား ပြဇာတ်တစ်ပုဒ် ကမယ်
အချိန်ကာလက ... သစ်သားရတု မိုးဦး
မီးအလင်းအမှောင်က... ခရမ်းရဲ့ ရဲ့ 
ဇာတ်ဝင်တေးက... သဂြိုင်္ဟ်ခြင်း
လူရယ်ဖို့သက်သက်တော့ မဟုတ်ဘူး ။ ။
(ဇူလိုင် ၇ ရက် ၂၀၀၄ ၀မ်းနည်းမှုများသို့ အမှတ်တရ)
Posted by လင်းပြာနွေ at 1:32 PM No comments:
ငါဟာ ဘယ်တော့မှ သေဆုံးခွင့်မရတဲ့
ငါ့နာကျင်မှုတွေနဲ့ထပ်တူညီစေမဲ့
ပျော်ရွှင်မှုမျိုး . . မင်းပေါ့တီးပေါ့ဆပဲ
ဒါဟာ လူသားဆန်မှုတစ်ခုလို့လည်း မထင်ပါနဲ့ 
အဲ့ဒီလို ငါက မယုံကြည်ရဘူး
ငါ့ကို . . ပုလင်းဖုံးတစ်ခုလိုသဘောထားပေး
လောလောဆယ် တစ်ခုပဲ တောင်းဆိုပါရစေ
ငါက နောက်ထပ် ခိုးယူမှုတစ်ခု ကျူးလွန်ရဦးမှာမို့ လို့။ ။
၄၊ ဧပြီ ၊၂၀၀၃
Posted by လင်းပြာနွေ at 12:54 PM 1 comment:
ပြာမှုန်နေသော လမ်းတစ်လျှောက်၌ လူသူအသွားအလာကျဲပါးလျက်... နှင်းများ စိမ့်ခဲအောင် ကျဆင်းနေ၏။ ကတ္တရာလမ်းမပေါ်၌ နှင်းဖက်နုနုများ လွှားကျနေသည်။ လူတိုင်း၏ အိမ်ပြတင်းများ ပိတ်ထားကြသည်။ တစ်စုံတစ်ရာ ၀င်လာမည်ကို စိုးသောကြောင့်လားမသိ။ …… စိမ့်နေအောင် ပိတ်ထားကြ၏။ ပူရှိမ်းရှိမ်းအေးမြမြလေတစ်ချက် တိုးဝှေ့သွားသည်။ အစိမ်းရောင် သစ်ရွက်များပေါ်ရှိ နှင်းဖက်များ အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်သို့ ဖွားခနဲကျသွား၏။ ကောင်းကင်သည် အဖြူရောင်ပိတ်ကားတစ်ချပ်နှင့်ပင် တူနေ၏။ အနက်ရောင် ဆံချည်မျှင်တစ်စနှင့်တူသော လမ်းမသည် မျှင်းမျှင်းလေးလွင့်နေသည်။ နှင်းများကား ဖုံးတစ်ဝက် ဖယ်တစ်ဝက်. . . ကျွန်မ အိမ်မက်မက်နေတာများလား . . .
လွင့်နေသောလမ်းမပေါ်၌ ကျွန်မတစ်လှမ်းချင်းလှမ်းနေ၏။ ကျွန်မ ဘယ်ဆီသွားနေတာပါလဲ . . ပိတ်ထားသောအိမ်များဆီသို့ လား . . . ပိတ်ထားသောအိမ်များထဲတွင် ကျွန်မအိမ်တစ်အိမ်များ ပါနေပြီလား။ ဟောဟိုက တံခါးရွက်အညိုများနှင့်အိမ်သည် ကျွန်မအိမ်များလား . . ဒါမှမဟုတ် ဟောဟိုက တံခါးရွက်အပြာများနှင့်အိမ်များလား . . . ဒီလိုဆို. . ကျွန်မကိုတံခါးလာဖွင့်ပေးမည့်သူတစ်ယောက် ရှိနေမည်ပေါ့. မဟုတ်ရင်ကော. . . မဟုတ်ရင် ကျွန်မ၌သော့တစ်ချောင်းတော့ရှိရမည်။ ကံကောင်းလျှင် ကျွန်မအိမ် တံခါးအဖွင့်၌ ကျွန်မအတွက် ပြင်ဆင်ထားသောပါတီတစ်ခု စောင့်ကြိုကောင်းစောင့်ကြို နေလိမ့်မည်။ ဒီ့ထက်ပိုကံကောင်းလျှင်တော့ ကျွန်မအား နွေးနွေးထွေးထွေးပြေးပွေ့ဆီးကြိုမည့် တစ်စုံတစ်ယောက် ရှိနေနိုင်မည်။
ဒီ့ထက်ပိုကံကောင်းလျှင်ကော . . .
ကျွန်မလမ်းမပေါ်သို့ ကဆင့်ကလျားကြည့်လိုက်၏ . . . အလင်းများဖွေးဖွေးလှုပ်လျက် . . . . . . လမ်းပေါ်၌ ကျွန်မနှင့် သူစိမ်းတရံဆန်သည့်သူများ ရှိမနေ . . . ဒါဆိုရင်းနှီးသူတွေကော . . .ရင်းနှီးသူတွေ . . . ကျွန်မဦးခေါင်းတွင်း၌ တစ်စုံတစ်ရာ တစ်ဖျက်ဖျက်လက်နေ၏ . . . ကျွန်မနှင့်ရင်းနှီးသူတွေ . . . ရင်းနှီးသူတွေဆိုတာ မည်သို့ သောအရာကိုခေါ်သနည်း . . . ရင်ဘတ်ချင်းနီးသူများလား . . . လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲနွေးမြနေသူများလား . . .အလွန်အမင်း ရယ်ရယ်မောမော စကားပြောခဲ့ဖူးသူများလား . . . အလွန်တရာ စက်ဆုပ်စွာဖြင့် ပုခုံးဖက်ပေါင်းနေသူများလား. . . အလွန်တရာ လေးစားစွာ ကိုးကွယ်မိနေသူများလား . . .များလား . . .များလား . . .
နံဘေးမှ တစ်စုံတစ်ရာ လင်းကနဲဖြတ်သန်းသွာ၏ . . . မည်သည့်အရာလဲ ကျွန်မ မစမ်းစစ်တော့ ကြည့်တိုက်တော့ တံခါးရွက်အညိုများနှင့် အိမ်တစ်လုံး မျက်စိရှေ့ မှောက်၌ လွင့်နေ၏ . . . လွင့်နေဟန်ရှိ၏. . . ဒါ ကျွန်မအိမ်များလား . . .ကျွန်မအိမ်ဆို အနည်းဆုံး ကျွန်မကို သိသည့်လူများ ရှိရမည်။. . မဟုတ်သေးဘူး . . ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း နေသည့်အိမ်ဆိုရင်ကော . . .မည်သူမှရှိမည်မဟုတ် . . . ဒါဆို ကျွန်မအိမ်ဖြစ်ဖို့ သော့တစ်ချောင်းတော့ ရှိရမည်။ ဟုတ်တယ် ။ ကျွန်မအိမ် ရှေ့တည့်တည့်၌ ရပ်လျက် သော့တစ်ချောင်းကိုရှာသည် . . .စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်သော့တစ်ချောင်းကို ရှာဖွေနေ၏ . . .ဘယ်မှာလဲ . . . ငါ့အိမ်ဆိုတာ၏သော့ . . .ဘယ်မှာလဲ . . .
အချိန်ဘယ်လောက်ကြာအောင် သော့အားရှာဖွေနေမိမှန်းပင်မသိ . . .ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံး၌ ဇောချွေးများဖြင့် . တုန်ရီနေ၏။ မောပန်းမှု သဲ့သဲ့စိမ့်ဝင်ပျံ့ နှံ့ လျက်ရှိသည်။ ကျွန်မအရှေ့ ရှိတံခါးအညိုကြီးသည် မာန်တင်းလျက် ၀င့်ထည်စွာစေ့ပိတ်ထား၏. . .(စေ့ပိတ်ထားသယောင်ရှိ၏). . ကျွန်မ ဘာလုပ်ရမည်နည်း . . . ကျွန်မ အိမ်ထဲဝင်ရမှ ဖြစ်မည် . . . ကျွန်မအိမ်ဖြစ်သောကြောင့် အိမ်ထဲဝင်ရမည်။ တံခါးရွက်အညိုများအား ကျွန်မစိုက်ကြည့်နေမိ၏ . . . အိမ်ဆိုသည်မှာ ဤ မျှပင်ဝင်ဖို့ ရာခဲယဉ်းပါသလား . . .ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံး ဇောချွေးများဖြင့် ထုံထိုင်းနေ၏. . . လက်ကောက်ဝတ်ဆီမှ တဒိတ်ဒိတ်သွေး တိုးနှုန်းညံနေ၏ . . . ကျွန်မဦးခေါင်းသည် မိတ္တူကူး စက်တစ်ခုအလား အလုပ်လုပ်နေ၏ . . ကျွန်မ ဘာများဖြင်ရတာလဲ . . . အဘယ်ကြောင့် ဤတံခါးကြီးရှေ့ ၌ ဤမျှ တုန်လှုပ်နေရသနည်း ။
ဟုတ်တယ် ကျွန်မအိမ်ပဲ... ကျွန်မ၀င်ရမည်ပေါ့ . . .ရုတ်တရက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဝေးပြေးလမ်းမပေါ် ထုံထိုင်းထိုင်း မောင်းနေသော ကားတစ်စင်းလို ခံစားလိုက်ရ၏ . . မောတယ် . . .မောတယ် . . မောပန်ခြင်းသည် ကျွန်မအား တစစ်စစ် ခဲနေ၏ . . . အမောကြောင့် ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံး ရောင်အမ်းအမ်း ခံစားနေရ၏ . . . ဘာကြောင့်မောပန်းရသနည်း . . .စေ့ပိတ်ထားသောတံခါးများကြောင့်လား . . . ကျွန်မ၌ သော့တစ်ချောင်း မရှိသောကြောင့်လား . . . အိမ်ဆိုသည့် အရှိန်အ၀ါကြောင့်လား . . . ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံးရှိ သွေးများဆူပွက်လာသည် ။ မျက်လုံးများပြာဝေလာ၏ ။ ကျွန်မသွေးရူးသွေးတန်းဖြင့် တံခါးအညိုကြီးအား ဆောင့်တွန်းပစ်လိုက်၏ . . .အလင်းများ ဒလဟော ပြိုဆင်းကျလာ၏ . . . မျက်စိများ ကျိန်းစပ်ပြာဝေလောက်အောင် အိမ်တွင်း၌ စူးစူးရှရှ လင်းနေ၏။ လင်းလွန်းသောကြောင့် အိမ်နံရံများပင် သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရ ။ အိမ်သည် အလင်းချည်းသက်သက် သိုလှောင်ထားသော ဂိုထောင်တစ်ခုနှင့်ပင်တူနေ၏ . . ကျွန်မအလင်းထဲသို့ တစ်လှမ်းချင်းတိုးဝင်သွား၏။
အလင်းထံသို့အကြောက်အလန့် မရှိကျွန်မတိုးသွား၏ ။
လူရှိလား . . .
ကျွန်မပါးစပ်က အူကြောင်ကြောင် စကားတစ်ခွန်း ခုန်ထွက်သွားသည် ။ မဟုတ်သေးပါဘူး . . . ငါ့အိမ်ဆို ဒီလိုမေးစရာ ဘာအကြောင်းများရှိမည်နည်း . . .ဟုတ်တယ် . . . အမှန်ဆို ပြန်လာပြီလို့ ... ပြောရမှာ . . .
ကိုယ့်ကိုကိုယ် အတော်ရယ်ချင်သွားသည် ။ အိမ်သည် အလင်းဖြင့် တိတ်ဆိတ်နေ၏ ။ အိမ်တွင်း၌ ကျွန်မအား ကြိုမည့်သူများ ရှိမနေ . . .သို့ သော် . . .နှင်မည့်သူများလည်း ရှိမနေ . . . ဒါ ငါ့အိမ်ပေါ့... ကျွန်မရေရွတ်လိုမိ၏။ ရီဝေမှုန်ဝါးစွာဖြင့် တစ်အိမ်လုံးအား လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနေမိ၏။ အိမ်တွင်း၌ အလင်းမှတစ်ပါး မည်သည့်သက်ရှိ သက်မဲ့အရာများအား မတွေ့ ရ ။ ကျွန်မ နွမ်းရိသွား၏ ။
ဒါကျွန်မအိမ်တဲ့လား . . . အံသြစရာ . . . ကျွန်မအိမ်ဖြစ်ဖို့ ရာ မည်သည့်အရာမှမလိုပါလား . . .
သော့ မလို . . .ဆီးကြိုမည်သူ မလို . . .အထောက်အထားပစ္စည်းများ မလို . . . နှုတ်ခွန်းဆက်သရန် မလို . . . ကျွန်မသည် အလင်းထဲ၌ မတ်မတ်ရပ်လျက် . . . အိမ် ဟူသောဝေါဟာရ ကျွန်မခေါင်းထဲသို့မည်သို့ရောက်လာသနည်း . . .ခန္ဓာကိုယ်မှ ခံစားမှုတစ်မျိုး ယိုစီးထွက်လာ၏ ။
ကျွန်မ အိမ်အပြင်လမ်းမပေါ်သို့တစ်ဟုန်ထိုး ပြေးထွက်သွားလိုက်၏ ။ ကတ္တရာလမ်းကြီးသည် စောစောကအတိုင်း မြေ့ မြေ့ မှုန်ရီလျက်ရှိ၏ ။ လမ်းနှင့်ထိတွေ့ နေသော ကျွန်မခြေထောက်များ ရဲတင်းလွန်းနေ၏ ။ ဘေးတစ်ဘက်တစ်ချက်၌ ပိတ်ထားသောတံခါးများရှိရာ အိမ်များ . . .ဝေသီ လွင့်ပါးလျက်ရှိ၏ ။ ကျွန်မသွေးများထဲ၌ ရေနွေးစီးကြောင်းတစ်ခု ခက်ထန်စွာ စီးဆင်းနေသည် ။
မျက်ဝန်းများ အေးစက်ကျပ်ခဲလျက် . . နှင်းမိုးထားသော မြင်ကွင်းထဲ စွတ်ရွတ် တိုးဝင်ပစ်လိုက်၏...
သို့ သော် . . . . .
ပိတ်ထားသော တံခါးများကိုတော့ မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မှ ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတော့မည်မဟုတ်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ဤ၀တ္ထု၏အမည်သည် အိမ် ဖြစ်သည် ။
Posted by လင်းပြာနွေ at 12:34 PM 1 comment:
ဘာ ပါလို့ အမည်မတပ်လည်း
နွေ . .မိုး . . ဆောင်း . .
မျက်ဆန်ညိုညိုလေး အကြည့်တစ်ငွေ ကို
ဆယ်စုနှစ်ထက်ဝက်စာ ရင်နဲ့ မိုးခဲ့မိတယ်
ငါက ကောင်းတုန်းအရွယ်မို့ရူးပါတယ် ။
လက်ဝဲဘက်မှာ ဟုတ်လိမ့်နိုးနိုးတွေ ရှိတယ်
ဘက်ယာဘက်မှာ ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာတွေချည်း ရှိတယ်
တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် သာသာပဲ ငါလမ်းပျောက်နေခဲ့တာ ။
ကြေးထပ်ထိုးနှက်ကြစတမ်းဆို . .
ချစ်တယ်လို့ ချည်း မရပ်မနားပြောခဲ့မ်ိမှာ
စက္ကန့် သုံးရာစာ ခိုးငေးရခွင့်လေးပဲ
ငါစိန်ခေါ်ခဲ့မိတာ ။ ။
(၁၀၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၀၄၊ အင်္ဂါနေ့ )
Posted by လင်းပြာနွေ at 12:30 PM2comments:
(ငါ့ကိုယ်ငါတော့ အဲဒီလိုအထင် )
နှလုံးသားကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်လျှောက် ခိုင်းလိုက်တယ်
ငါမှားတယ်လို့ မပြောဘူး ။
လူမှန်းသိစတည်းက ငါ . .
ခု ငါဘယ်မှာလဲ ။
ကံတရားရေ . . .
လှည့်ကွက်တွေ ဆိုးရွားမှုတွေ အကုန်သာထုတ်သုံးတော့
ဒီအတိုင်းပဲစီးဆင်းမယ် . . .
ပင်လယ်တစ်စင်း ရှိမနေမှန်းလည်း ငါသိတယ် ။ ။
(၁၃၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၀၃)
Posted by လင်းပြာနွေ at 12:27 PM No comments:
The Hole Being Dug, Getting Deeper
I want to be neither an educated woman, norapoet, norawriter, norabusiness woman, noradoctor, norateacher. I want... no, nothing, but I want to be nothing.
Due to the raining season... it is raining. I want to run along the water-flow of rain, like in my childhood,without slipper. That matter must be postponed. NO. Yon can run if you wish. I, inaraining season, have been breathlessly heart-broken. I had thrown the pieces of my broken-heart out into the rain. That is right. I love raining season. NO. I hate raining seasons. No... let it be . Do leave the raining seasons in the raining season.
All over the world, the people who torture themselves most are writers. All over the world, the people who are the most insane are blubber mouths. All over the world, the pwople who are sickly most are the intelligentsia. All over the world, the kind of people who are the most carefree are who lack of knowledge. In my room,there are so many cockroaches, uncountably. The things I hate most are cockrosches and telephones. The thing I want most in my life is conventionality. The statement 'Artists are the noblest ones' really amaze me. I don't understand the meaning of the word'nobility'. The cat I've lost is noble(I want you to correct my grammer and usage irrespectively if mistaken). I am'crazy selfish' indeed.
"The art of making famous "by Jean Paul Sartre is my favourite short story. (You may praise or blame me for it as your will). I have quite much evil.I haveaphotograph taken unknown to himself,ahidden look preserved for years and hopes that hurt myself. (All of them tendency to expect something in any moment). In my bed there are some hairs of mine, disgusting. The poem I have often recited is "My Little Brother,let's go to the zoo". The character of THE OUTSIDER", because of the lack of knowledge on the THIRTY EIGHT KINDS OF AUSPICIOUSNESS", had to face death-penalty. I don't need to worry about it for I have throughly taken the verse about them by heart. I am not afraid of rats. But I am afraid of being hit by the lightning. Therefore I always protect against it with an umbrella whenever it rains. This year it rainsalittle bit more.
Posted by လင်းပြာနွေ at 12:14 PM No comments:
လိုချင်တာမရရင် ကလေးတွေငိုတတ်ကြတယ်။ လိုတာမရတဲ့အခါတိုင်း ကလေးတွေ ငိုယိုပြီး တောင်းတတ်ကြတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ လိုချင်တာ မရခဲ့ရင်တောင် သူတို့ မေ့မေ့လျော့လျော့နဲ့ အငိုတိတ်သွားတတ်ကြတယ်။
လိုချင်တာမရရင် ငိုတတ်ကြတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ငိုသံတွေကဘယ်သူ မှမကြားနိုင်တဲ့ ငိုသံမျိုးတွေ။ အဲဒီငိုသံတွေကကလေးတွေရဲ့ငိုသံတွေလို မေ့မေ့ လျော့လျော့နဲ့ ပြီးဆုံးမသွားကြဘူး။ ဘယ်တော့မှ မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ ငိုချင်းရှည်မျိုးတွေ။ နှလုံးသားကို ဖွင့်ပြီးနားထောင်ကြည့်..... လူပေါင်းများစွာရဲ့ ငိုသံကိုကြားရလိမ့်မယ်။
ဒီလူတွေကရော ဘာဖြစ်လို့ ရိုးသားစွာ မငိုချင်ကြတာလဲ။ မငိုနိုင်ကြတာလဲ။ လိုချင်တာမရခဲ့သည့်တိုင် ကလေးတွေလို ဘာဖြစ်လို့ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နဲ့ အငိုမတိတ်နိုင်ရတာလဲ။
တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်ချင်စိတ်က လွတ်လပ်တယ်။ အဲဒီပိုင်ဆိုင်ချင်စိတ်ရဲ့ နောက်မှာ အိပ်မက်အဆောက်အအုံ အကြီးကြီးမပါဘူး။ လူကြီးတွေကတော့ အိပ်မက်အဆောက်အအုံအကြီးကြီးတည်လို့။ ခက်တာက အဲဒီအဆောက်အအုံကြီးကို လူကြီးတွေ ဘယ်လိုမှ မဖြိုဖျက်နိုင်ကြဘူး။
ကျွန်မတို့ရော...... ဘယ်လို အိပ်မက်အဆောက်အအုံကြီးတွေ တည်ပြီး ငိုနေခဲ့ကြတာလဲ။ ဘယ်လိုငိုသံမျိုးတွေ ဖန်တီးနေခဲ့ကြတာလဲ။ တကယ်ဆို ကျွန်မတို့အားလုံး ငယ်ငယ်က လွတ်လပ်စွာ ငိုခဲ့ဖူးသူတွေပါပဲ။ ။
Posted by လင်းပြာနွေ at 12:08 PM No comments:
အဲဒီပြူတင်းမှာ ဘာဆေးရောင်မှ သုတ်မထားဘဲ
ပြူတင်းကကြည့်ရင် ပန်းခင်းကြီးလည်း မမြင်ရဘူး
ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ဟင်းလင်းပြင်တစ်ခုပဲ ရှိတယ်
အဲဒီပြူတင်းဘောင်မှာ ငါ့တစ်ဘ၀လုံး လွှားတင်ထားတယ်
ငါ့ဖြစ်တည်မှုတွေ ကစဉ့်ကလျားဝဲကျနေတယ် ။ ။
Posted by လင်းပြာနွေ at 11:57 AM No comments:
ငါ့ရှေ့မှာ တမ်းတခြင်းတွေနဲ့ ဖောရောင်နေတဲ့
လေလှိုင်းထဲ စီးမျောလာတဲ့ မင်းရယ်သံမှာ
အိပ်မက်တစ်စင်း လှပ်လှပ်လေး အောင်းနေတယ်
မင်းဖန်တီးထားတဲ့စကားလုံးတွေရဲ့ ဖွဲ့နွဲ့မှုမှာ... ငါကသာယာလို့
လျှပ်စစ်ဓာတ်နဲ့ လွမ်းတဲ့အလွမ်းလည်း အလွမ်းပဲ
လေထုထဲ လွှင့်တင်လိုက်ရအောင်လေ ။ ။
Posted by လင်းပြာနွေ at 11:53 AM4comments:
If I were you, I would take care of nature.
If I were you,I wouldn't laugh at loving kindness.
If I were you, I would neglect traditional matters.
If I were you,I would stay away from opinions of human beings.
If I were you,I wouldn't choose to beavitim of faith.
If I were you,I would............
If I were you ,I would............................
Posted by လင်းပြာနွေ at 11:50 AM2comments:
ငါတို့နှုတ်ဆက်ခြင်း ဘယ်လောက်တောင်သန့်စင်သွားမလဲလို့။ ။
Posted by လင်းပြာနွေ at 11:13 PM 1 comment: